ကျမသိပါရစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ကျမသိပါရစေ
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Aug 5, 2011 in Education, How To.. | 12 comments
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ တစ်ခုသောစာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် ယနေ့ စာမေးပွဲတစ်ရပ် ပြု လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် စာမေးပွဲ ကျင်းပသည်မှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်သော်လည်း ယနေ့ ပြုလုပ်မည့် စာမေးပွဲနှင့် ပက်သက်၍ မူ ကျောင်းသည်သိသာထူးခြား၍ နေသည်။
ထိုကျောင်းမှကလေးများတဖွဲဖွဲ ၀င်လာနေစဉ် ဆရာများမှာ ဟိုနားစုစ၊ု သည်နားစုစုဖြင့် တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်။ ရံဖန်ရံခါ ကျောင်းအ၀င်လမ်းဆီသို့ လည်းလှမ်းကြည့်ကြ၏ ။
“ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဒီကိစ္စကို လက်ခံဖို့ မကောင်းဘူးဗျာ” ဟု ဆရာတစ်ယောက်ကဆိုသည်။
“ဒါကတော့ ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လေဗျာ။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ” ဟု နောက်ဆရာတစ်ယောက်က သက်ပြင်းချသည် ။
ထိုစဉ် အလုပ်ဝင်သည်မှာ မကြာသေးသော ဆရာငယ်လေးတစ်ယောက် ရောက်လာကာ ဟိုဟိုသည်သည် ကြည့်ပြီးမေးလိုက်၏ ။
“သြော်…ဆရာလေးမသိဘဲကိုး ။ဒီနေ့ ကျောင်းက လုပ်တဲ့စာမေးပွဲမှာ ဟိုစိတ်ရောဂါဆေးရုံက
ကျပ်မပြည့်တဲ့ ကလေးတွေက ပထမတန်းအနေနဲ့ ဝင်ဖြေမှာတဲ့ဗျ”
“ဟင်…သူတို့ ကစာသင်ရလို့ လား…သူတို့ ကိုဘယ်သူစာသင်ပေးလို့ လဲ”
“ဟိုအမျိုးသမီးလေ ၊ ဒေါ်ရွှေအိမ်စည် ပေါ့”……
“ကြံကြီးစီရာဗျာ ၊ သူပါ ရှူးနေလားမသိဘူး”……
“သူရှူးတာ မရှူးးတာထက် အဲဒီအရှူးလေးတွေ ၊အနုံ အ, အ လေးတွေနဲ့ ကျုပ်တို့ ကျောင်းက ကလေးတွေ အတူရောပြီးဖြေရမှာဗျ၊ ၊ လူစဉ်မှီတဲ့ကလေးတွေ နဲ့လူကောင်းပကတိလေးတွေ ပြိုင်ရသလိုဖြစ်နေပြီ ။ကျက်သရေမရှိလိုက်တာဗျာ….”….
“ကျုပ် ကြားဘူးတာတော့ သူ့ စာသင်နည်းက အဆန်းဆိုပဲ ၊ ကလေးစိတ်သဘာဝကိုအသုံးချတယ်ဆိုလား ၊ သူကျောင်းမှာတော့ နာမည်တော့ ထွက်စပြုနေတယ်နော့ ”……ဟုတစ်ယောက်ကဆိုသည်။…..
သူကများ ပထမတန်း အနေနဲ့ များပြိုင်ကြည့်ဖို့ဝန်ကြီးအထိ တောင်းဆိုရတယ်လို့ ဗျာ….”
ထိုအခိုက် ဆရာတစ်ယောက်က “ဟော.ဟော..ဟိုမှာ….လာနေကြပြီ ဗျို.” ဟု ခပ်ကျယ်ကျယ် ပြောလိုက်သည် ။
အသက်သုံးဆယ်ခန့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး နှင့် ကလေးငယ်တစ်အုပ်သည် ကျောင်းအတွင်းသို
့ရိုရိုကျိုးကျိုး မဟုတ်ပဲ ဆူဆူညံညံ ခုန်ပေါက် ၀င်လာသည် ကိုကြည့်ကာ ဆရာအိုကြီးတစ်ယောာက်
“ဟင်း…စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အနုံ အ, အလေးတွေ” ဟု ရှုံမဲ့ ပြီး ရေရွတ်လိုက်သည်။
ထိုကလေးများ၏ ဆရာမဆိုသူ အမျိုးသမီးက သူ့ကလေးတွေ ကို နေရာချပေးပြီးမကြာခင် စာမေးပွဲ
စချိန် ရောက်လေသည် ၊၊ နှေးကွေးတုံဆိုင်းခြင်းမရှိပါ ဘဲ လျှင်မြန်သွက်လက်စွာ ဖတ်ရှု့ ရေးချွတ် ဖြေဆိုနေ
သော လူစဉ်မမှီ ဟု ဆိုကြသည့် ကလေးများကို မြင်ရသောအခါ ဆရာအပေါင်းတို့ မျက်လုံးပြူး
သွားကြပေသည်။ ထိုပြူးသောမျက်လုံးများကို ပို၍းပြူးကျယ်စေသည် မှာကား ထိုကလေးများ၏ ရမှတ်နှင့်
သူတို့ ကျောင်းမှ ပုံမှန်ကလေးများ၏ ရမှတ် တို့ တူညီနေ နေကြခြင်း ပေတည်း။
စောစောက ကျောင်းဆရာ တစ်အုပ်သည် ကလေးများ၏ဆရာမ ကို ၀ိုင်းပတ်ခြံရံလျှက်
“အံသြစရာကောင်းလိုက်တာ ၊ဒေါ်ရွှေအိမ်စည်ရယ်….ခင်ဗျား ဒီအရွယ် ကလေးတွေကိုစာတွေ တအားသင်ဘီု့ စောလွန်းသေးတယ်။ သူတို့ ကို ဘယ်လို လုပ် လိုက်တာ လဲဟင်” လို့ ဝိုင်းမေးကြတယ်..။
ဒီအခါ ဒေါ်ရွှေအိမ်စည် က ထိုသို့ မေးသော ဆရာကို အေးချမ်းစွာ ပြန်ကြည့်လိုက်သည် ။ထိုနောက် တစ်လုံးချင်းပြောလိုက်သည်။
“ကျမ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မလုပ်ပါဘူး ။ ကလေးသဘာဝကို နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီး သူတို့ သဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပညာရေးကို ရှာဖွေတာပါပဲ….”။
“ကျမလည်း ဆရာတို့ ကို တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ ကျမရဲ့ကံမကောင်း အကြောင်းမလှရှာတဲ့ ကလေးတွေနဲ့တန်းတူရည်တူ
ဖြစ်သွားလောက်အောင် အဲဒီ အကောင်းပကတိ ပုံမှန်ကလေးတွေကို ဆရာတို့ ဘယ်လိုလုပ် လိုက်ကြတာလဲ.… ကျမလည်း သိပါရစေ…”
စာကိုး။ ။မောင်သစ်ဆင်း (ကလေးတို့ မနက်ဖြန်)
**နောင် လာမည့် အနာဂါတ် ပညာရေးစနစ် သည် ပြောင်းလဲ သွားလျှင် တွေ့ နိုင်မည်ထင်ပါသည်။
**ယခုအခါ အမှန် တကယ် ပြိုင် ရန် ဘယ် ၀န်ကြီးမှ ခွင့် ပြုချက် ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
**လူကောင်း ကလေး နဲ. ပုံမှန် မဟုတ်တဲ. ကလေးကို နှိုင်းယှဉ်လို.တော့မရပါဘူး ။ဒါပေမယ့် ကလေးဘ၀ က အသိကိုတော့နှိုင်းယှဉ်လို့ ရပါတယ်။
လာလေ..အတူသွားစို့့…..အနာဂါတ် ပညာရေးပန်းတိုင်ဆီ……...
ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေမှာ. . ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့ကလေးတွေအတွက်.. သီးသန့်ကျောင်းရှိတယ်..။
ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့ကလေးတွေကို မြှင့်တင်ပေးနေသူတိုင်းကို.. လေးစားပါတယ်ခင်ဗျား…။
ဥာဏ်ရည်မီတဲ့ကလေးနဲ့ ဥာဏ်ရည်မမီတဲ့ကလေးတွေက အသက်တူတူပဲလား မသိဘူး။ အသက်တူဥာဏ်ရည်တူရင် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီကလေးတွေကို ဥာဏ်ရည်မမီဘူးလို့ သတ်မှတ်တာလဲ မသိဘူး။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဥာဏ်ရည် မမီသူတွေကို အတူတွဲသင်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ခလေးသဘာဝ စနောက်ရင်းနဲ့ ခလေးတွေရဲ့စိတ်ဓါက်ကို ထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ပြိုင်ကြည့်လို့ တန်းတူ ဆိုတဲ့အဖြေရရင်တော့ သင်တဲ့နည်းစံနစ်ကို တရားဝင်ပြဌာန်းရင် အကျိုးရှိမယ်ထင်တယ်။
Yes, we need specific school for them. Main feature is financial supporting, of course. It is possible to get some assistance from NGOs or oversea communities. In our country, I don’t know really whether it is can do or not like that kind of realtion.
ကလေးတွေနဲ.ယှဉ်ဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒါဥာဏ်ရည်မမှီတာဘယ်ဟုတ်မဘဲ။ သင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာမလည်းတော်လို.ပေါ့လေ။
တချို့ဥာဏ်မမှီတဲ့လူတွေထဲမှာ အကြောလိုက်နေသလို လမ်းသွားရင် စောင်းငန်းစောင်းငန်းလူတွေ တွေ့ဖူးတယ်
သူတို့မွေးတဲ့မိဘက မွေးပြီးနောက်ပိုင်း စီးပွားတက်သတဲ့
စိတ်ဝင်စားစရာပါ ဘယ်လိုများ သင်ကြားလိုက်တာပါလဲ
pan si says:
ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရတာ တကယ့်ကို မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ … ။ စိတ်ရှည်တဲ့ လူမျိုးမှပဲ ဖြစ်မှာပါ .. ။
အလွန်ကောင်းတဲ့ အလုပ်မို့လို့ … မရွှေအိမ်စည်ကို ဂုဏ်ယူလေးစားမိပါတယ် ။ ဆထက်ထမ်းပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပါတယ် .. ။
ရသတွေ အများကြီး ပေးတဲ့
ပို့ စ် တစ်ခုပါပဲ ။
ကျွန်တော့် အမြင် ပေါ့နော်
သားသမီး မရှိသူ များ က တော့
ဒီလို စာသင်ခြင်းမျိုးကို လက်ခံ နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပြီး
သားသမီး ရှိသူ များ ကတော့
လက်ခံ ကြမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ 
အပေါ်က နေးချား ပြောသလိုပါပဲ
ရန်ဖြစ်တာ မျိုးရှိခဲ့ရင်……ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တင် လို့ မြင်မိပါတယ်နော်
သိပ်ကောင်းတဲ့ စာမူလေးပါ ။ တွေးစရာလေးတွေ အများကြီး ပဲ ရလိုက်တယ် ။ ရေး ပြီး တင်ပေးလို့့ကျေးဇူးပါပဲ။
ခွဲခြားဆက်ဆံတာက တော်တော်ကို ကလေးအတွက်လမ်းမှားေ၇ာက်ဖို. များပါတယ်